Ny fiantraikan'ny fanangonana sy fanatsarana ny angona B2B ho an'ny marketing | Martech Zone
Alahady, Septambra 13, 2015 Douglas Karr
Rehefa nanomboka ny dia nataoko aho tamin'ny fanatsarana ny fanatsarana tsy tapaka, ny fahitana iray izay nifanaraka tamin'ny fanatsarana ny dingana rehetra dia ny tsy fahaiza-miasa ary ny fotoana manaraka - amin'ny asa tanana. Am-polony taona maro taty aoriana dia hitako fa marina izany amin'ny masoivohontsika.
Ohatra iray amin'izany ny fotoana ahitan'ny mpanjifanay vola ao anatin'ny laharany. Rehefa miova ny mpanapa-kevitra dia matetika atahorana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Tsy maninona izay ataontsika; resaka zava-misy fotsiny io. Ny olona vaovao dia manana ny fahaizany, ny fizotrany ary - matetika - vondrona orinasa mpanohana izay nanampy azy ireo taloha ary mety hanampy azy ireo amin'ny ho avy.
Rehefa mitranga ny fiovana amin'ny fitarihana dia manaraka ny tetibola sy ny fahafaha-manao. Ohatra iray hafa - matetika isika no mahita ny tenantsika miasa ho an'ny tanora vao manomboka teknolojia marketing izay nisy fidiran'ny famatsiam-bola. Na aiza na aiza anefa ny fanovana! Amin'ity infographic avy amin'ny Salesforce, nomarihin'izy ireo fa isaky ny antsasak'adiny dia miova ny adiresy 120, miova ny laharan-tariby 75, ny CEO 20 no miala amin'ny asany ary orinasa vaovao 30 no miforona. Ny fahazoana miditra data toy izao dia ilaina amin'ny fampiroboroboana ny orinasako ary koa ny anao.
Salesforce Data.com Afaka manampy anao amin'ny fampiroboroboana ny angon-drakitrao mba hahafahanao mampivelatra mombamomba anao feno, ahafahanao mamantatra ny fomba fijerinao amin'ny alàlan'ny fizarana sy ny laharam-pahamehana ary hanatsara ny fampiroboroboana ny varotra sy ny varotra amin'ny fandefasana hafatra sy ny antoka.
Ireo mpivarotra maoderina dia mila manambatra ny fahaiza-mamorona sy ny herin'ny fitantarana amin'ny tantara miaraka amin'ny paikadim-pitantanana sy ny angona. Ny angona tsara kokoa dia ahafahan'ny mpivarotra manangana hetsi-panoherana kendrena ary manome ny atiny mety amin'ny vinavina. Amin'ny alàlan'ny fanangonana sy famakafakana ireo angon-drakitra firaka, ireo mpivarotra dia afaka mampita ny hevitry ny mpanjifa feno amin'ny ekipa mpivarotra azy ireo, manome antoka fa eo amin'ny pejy iray ihany ny tsirairay amin'ny famoronana traikefa mpanjifa manokana. Kim Honjo, Salesforce
Manome fotoana tsy mampino ho an'ny orinasa toa ahy ny angona. Salesforce dia manana e-boky vaovao, Ahoana ny fomba hitondran'ny ekipa data-centric fandrosoana amin'ny fahombiazan'ny orinasa, ho an'ny orinasa hianaranao ny fomba ahafahan'ny ekipa fitantanana varotra, marketing, ary CRM manangana fikambanana ivon-data-centric mahomby mba hitarika ny fahombiazan'ny orinasa.
Tags: b2bangona fifandraisana b2bangona b2bfifandraisana dataDatafahafenoan'ny dataangona kalitaodata momba ny varotraFanamafisana ny varotrasalesforce